Dzidziso: Maitiro ekuburitsa kunze kwako mapikicha kubva kuGoogle Mifananidzo kuICloud | IPhone nhau
Dzidziso: Maitiro Ekuburitsa Kwako Mapikicha kubva kuGoogle Mifananidzo kuenda kuICloud
Alex Vicente | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Mushure mekutanga muna 2015 seyemahara isingagumi yekuchengetedza sevhisi uye ita kushambadzira kwako kwakatenderedza maficha aya, Google Mifananidzo yave iri sarudzo yakanyanya kushandiswa nevashandisi veApple kumidziyo yavo yese. Nekudaro, izvozvi Google yakazivisa kuti kuchengetedza hakuzoite muganho muna 2021Ino inguva yakanaka yekutarisa mikana yatinayo yekutora mafoto edu kubva kubasa reGoogle nekuvaendesa kune imwe yakadai seICloud.
Kunyangwe sevhisi yacho isinga ganhurwe mu2021, hapana kumhanyisa kuita kuchinjisa kwemifananidzo kubvira sevhisi haisisina muganho kubva muna Chikumi 1, 2021. Uye zvakare, sevhisi ichapa 15GB yemahara ekuchengetedza emavhidhiyo nemifananidzo kubva pazuva rino zvichienda mberi.
Nekudaro, kana raibhurari yako yakakura kudarika 15GB, Zvichava zvirinani kana ukaronga kuendesa kune sevhisi senge iCloud kana iwe uchida kuichengeta (izvo zvingangodaro tine chokwadi kuti iwe unoda). Tichatsanangura pazasi matanho aunofanirwa kuteedzera kuburitsa raibhurari yako kubva kuGoogle Mifananidzo kuenda kuICloud.
1 Maitiro ekuburitsa raibhurari yako yeGoogle Mifananidzo kuICloud
1.1 Sarudzo 1 - Maitiro ekudhawunirodha raibhurari yako yese yeGoogle Mifananidzo
1.2 Sarudzo 2 - Maitiro ekudhawunirodha chaiyo zvemukati kubva kuGoogle Mifananidzo
1.2.1 Kubva Mac / PC pawebhu
1.2.2 Kubva kuGoogle Photos app pane iOS
2 Maitiro ekupinza ako mafoto kuICloud
2.1 Kubva kuMac
2.2 Kubva pawebhu
Maitiro ekuburitsa raibhurari yako yeGoogle Mifananidzo kuICloud
Sarudzo 1 - Maitiro ekudhawunirodha raibhurari yako yese yeGoogle Mifananidzo
Unogona kuenda ku takeout.google.com ku dhawunirodha kopi izere raibhurari yako yeGoogle Photos
Kuti ungotumira kunze mafoto / mavhidhiyo, tinya pa «Unmark zvese» kurudyi kwechinyorwa
Sarudza chete Google Mifananidzo kubva pane runyorwa rweanowanikwa masevhisi
Pazasi, tinya «Inotevera nhanho»
Sarudza zvaunofarira zvekutengesa kunze (frequency, faira mhando uye saizi)
Dzvanya pa Gadzira Export
Uchaona kufambira mberi kwekutumira uye uchagamuchira email kubva kuGoogle kana maitiro apera. Izvi zvinogona kusiyana zvichienderana nehukuru hweraibhurari yako
Sarudzo 2 - Maitiro ekudhawunirodha chaiyo zvemukati kubva kuGoogle Mifananidzo
Kuti utore kurodha zvirimo izvo zvinogona kukufadza kubva kuGoogle Mifananidzo, unogona kuzviita kubva ku photos.google.com kubva kune chero komputa kana zvakananga kubva ku iPhone, iPad kana chero imwe kifaa app. Iyi sarudzo ichatibvumidza isu kusarudza izvo chete zvemukati izvo zvatiri kuzoda kuendesa kune imwe sevhisi kana kungo chengeta padownload mudziyo.
Kubva Mac / PC pawebhu
Enda ku photos.google.com uye log-in neakaundi yako yeGoogle
Sarudza iwo mafoto aunoda kurodha pasi kumaka cheki yakatenderera iri mune yega thumbnail
Unogona kusarudza zvese kana ukasarudza mifananidzo kumusoro kuruboshwe uye bata Shift uye sarudza yekupedzisira vhidhiyo / pikicha kubva kuraibhurari. Izvi zvinobatsirawo pakusarudza mabhureki.
Unogona kushandisa iyo shortcut pane iyo keyboard Shift + D kuti udziburitse kana tinya bhatani rine matatu madenderedzwa muchikamu chepamusoro kurudyi uye tinya pa «Dhawunirodha»
Kubva kuGoogle Photos app pane iOS
Vhura iyo Google Photos app pane yako iPad kana iPhone
Tora nguva refu pikicha yemufananidzo kuti usarudze
Sarudza mifananidzo yaunoda inotsvedza chigunwe chako kubva pamufoto wakasarudzwa kana kuenda kudzvanya imwe neumwe iwo aunoda kurodha pasi
Dhinda bhatani "Goverana" kumusoro
Sarudza «Goverana pane» pazasi
Vatumire neAirDrop kana neemail kana zvichidikanwa
Maitiro ekupinza ako mafoto kuICloud
Paunenge iwe watora pasi pikicha yese kubva kuGoogle Mifananidzo raibhurari iwe yaunoda kusevha muICloud, isu tichaenderera kuendesa kunze nenzira mbiri: Mac kana kubva pawebhu
Vhura iyo app Mifananidzo pane yako mac
Isa mifananidzo yese yakadzorwa kubva kuGoogle Mifananidzo. Unogona kunyange kudhonza dhairekitori mawakange wakachengetwa
Dzvanya paMifananidzo mubhawa iri pamusoro peiyo system
Enda ku Zvaunoda> iCloud> Brand iCloud Mifananidzo saka zvese zvinowirirana ne iPhone yako nePadad.
Imwe sarudzo, inoenderana nekuti mangani mafoto kana mavhidhiyo awakadhonza, ndeye AirDrop yako iPhone kana iPad iyo ine iCloud Mifananidzo sarudzo yakaitwa. Nenzira iyi, kana vachinge vaendeswa kuchishandiso, ivo vanozowedzerwa kuICloud otomatiki.
Ita log-in pawebhu icloud.com
Dzvanya pane iyo gore icon ine museve wekuisa mapikicha
Nezve iyo inotumirwa kunze kubva kuGoogle Mifananidzo, isu hatizokwanise kuunza ese mafoto eimwe tisina kutanga tagadzirisa maforodha ese anotumirwa kunze akapatsanurwa kuita. Ndokusaka iyo sarudzo kubva kuMac iri nyore kwazvo kunyangwe ichizotarisana nenhamba yemifananidzo yauinayo.
Kana yako pfungwa iri kuchinjira kune nyowani yekuchengetedza sevhisi yemafoto ako senge iCloud, tiudze mumashoko uye utiudze ndeipi mhinduro yakanakira iwe kune shanduko yezano reGoogle Mifananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Dzidziso: Maitiro Ekuburitsa Kwako Mapikicha kubva kuGoogle Mifananidzo kuenda kuICloud
Ini ndinofunga ichi chinyorwa chinopa zvisiri izvo. Kutanga, Google haizodzime mapikicha iwe awakaisa kuGoogle Mifananidzo muna Chikumi 2021. Haufanire kuvaendesa kuICloud kuti vazvichengete. Isu tinoenderera mberi nenyaya yekuti mirawu yegoogle inotanga kushanda kubva muna Chikumi 2021, kureva kuti raibhurari yavo inogara 50 Gb pazuva iro, hapana dambudziko, kubva musi iwoyo ndipo pavanotanga kuwedzera. Kubva ipapo chisarudzo chako kuti unoda kuenda kune rimwe basa here kana kwete. Asi raibhurari yako ichagara ipapo. Google inokupa 100 Gb ye2 euros uye Apple 50 Gb ye1 euro. Zvakanaka, zviri kune wese munhu. Asi ini ndinofunga chinonzwisisika chinhu chekuita kuchengeta iwo mafoto paGoogle uye mune ramangwana sarudza.
Asi zvirinani kuzviita nekukurumidza sezvazvinogona nekuti ivo vanozovhara iyo sevhisi yeGoogle kune izvo zvinoita sekunge iri kutungamira chinyorwa, handiti? Ndosaka zvirinani kurodha pasi nekudzima zvese zvisati zvaitwa… Zvakare, Apple Cloud ndeye mahara uye vanopa 5 teras, ndinofunga mukuwasha wangu akandiudza kuti ane iPhone PRO MAX uye anoziva zvakawanda nezve tekinoroji, saka ini handioni chikonzero chekuve nechishandiso cheGoogle, icho spy, kuti kunyangwe chashanda kwazvo kwandiri: ronga mafoto ako, bvumira kutsvaga, gadzira maalbub uye usunungure nzvimbo pane yako nhare nekuita kopi munguva chaiyo mukati gore ... harina musoro zvakare. Kana zvirinani ivo vanozokutendera iwe ubhadhare uye kukubvumidza iwe kuti uwedzere majegi pane kuda, ipapo zvakadaro. Ini ndinofunga kuti munhu wese anofanirwa kudzima iwo mafoto kubva kugoogle izvozvi, nekuti nekuwedzera, ndiani anoziva zvavanoita nezviso zvedu ... zvirokwazvo avo vegoogle vane vashandi vanopedza zuva vachivatarisa nekunyeya ... ivo vadiki vane zvakavanzika ! Iye zvino ndinokwira ndoenda kune yemahara icloud!
Miguel S akadaro
Uri kutamba mbeveve, kana iwe uri?
Pindura Miguel S
Podcasts inowanikwa paApple Podcast zvino inogona kuiswa mune chero peji rewebhu
Chii chakavanzika mukati meiyo iPhone 12 mini? iFixit inotiratidza